कोरोनाको समयमा यस्तो हुनपर्छ तपाईको जीवनशैली, इम्यूनिटी बढाउन के गर्ने के नगर्ने ? - Health Today Nepal
September 5th, 2020 स्वास्थ्य विशेष0comments
काठमाडौं, २० भदौ : हामीले सानैदेखि नै ’स्वास्थ्य नै धन हो’ भन्ने कुरा सिक्दै आएका छौँ। यद्यपी, हालसम्म जसले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएनन्, उनीहरुका लागि यो कोरोना समयमा राम्रो स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने कुराको ज्ञान भएको छ।
रोग ब्याक्टेरिया वाला होस् वा भाइरस, यदि हाम्रो इम्यूनिटी अर्थात् रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो भयो भने हामी कम मात्र बिरामी हुन्छौँ। तपाईको इम्यूनिटी कत्तिको बलियो हुने भन्ने कुरा तपाईको जीवनशैली कस्तो छ? भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ।
डाक्टर र विशेषज्ञहरुका अनुसार, राम्रो जीवनशैली बिना मजबुत इम्यूनिटी सम्भव हुन सक्दैन। जीवनशैली केबल तपाईको खानपान, क्रियाकलाप वा निद्रामा मात्र सीमित नभएर यसमा तपाईको काम, आसपासको वातावरण, पर्यावरण र समाजप्रति तपाईको सजगता जस्ता कुराहरु पनि सामेल हुन्छन्। प्रतिरोधक क्षमताको अर्थ तपाई भित्र प्राकृतिक रुपमा उपलब्ध आत्मबल प्रणाली हो, जसले तपाईलाई कोरोना भाइरसलगायत सबै प्रकारका भाइरसहरुबाट बचाइ राख्न मद्दत गर्दछ।
खासमा तपाईको राम्रो–नराम्रो बानी तपाईको जीवनशैलीको एउटा हिस्सा हो।
व्यक्तिगत स्वच्छता र वातावरण
तपाईको खानपान र खाने–पिउने तरिका
तपाईको क्रियाकलाप अर्थात् सक्रियता
तपाईको उठाई, बसाई, हिडाई, सुताई, आदि।
अर्थात्, हाम्रो जीवनशैली इम्यूनिटीबीच गहिरो सम्बन्ध छ भन्न सकिन्छ।
राम्रो जीवनशैली बिना हाम्रो इम्यूनिटी अर्थात् रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुन्छ। यस्तोमा हामी कोरोना भाइरस वा अन्य भाइरल रोगको चपेटामा सहजै पुग्न सक्छौँ।
अधिक तेलमा तारेको र भुटेको खाना खादा कोलेस्ट्रोलको स्तर बढ्छ र यसले कोरोना संक्रमणको समयमा ब्लडमा अक्सिजनको आपूर्तिमा समस्या हुनसक्छ र अवस्था गम्भीर हुनसक्छ। त्यसैले, अधिक तेलजन्य खाना, जंक फूड, धुम्रपान र मद्यपानजन्य कुराहरुसँग दूरी बनाइराख्न विशेषज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।
यी कुराहरु बुझ्न जरुरी
प्रतिरोधक क्षमता एन्टीबडी डेभलप हुनुसँग सम्बन्धित छ, तर केही मानिसहरुमा लामो समयसम्म पनि इम्यूनिटी विकसित नभएको पाइएको छ। केही अध्ययनमा बताइए अनुसार, संक्रमणबाट ठीक भएपछि पनि मानिसहरुमा फेरि कोभिड–१९ को लक्षण देखिएको छ।
मानिसहरुले मास्कको प्रयोग गरिरहेका छैनन्, सामाजिक दूरी र सरसफाईमा ध्यान दिइरहेका छैनन्, यस्तोमा संक्रमणको खतरा सिर्जना गरिरहेका छन्। एजेन्सीको सहयोगमा
Previous article पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट भएकाले मात्र उपत्यका प्रवेश गर्न पाउने
Next article लैंगिक हिंसा रोकथाम परियोजनाको दोस्रो चरण प्रदेश नम्बर १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुरु
Dec 3rd 9:22 AM
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमध्ये ३६ प्रतिसतमा शारीरिक अपाङ्गता
Dec 3rd 8:26 AM
चार दिनपछि प्रधानन्यायधिश जबरा डिस्चार्ज भए
जाडोमा दोब्बर बढ्छ दम, तर नआत्तिनुस् यसरी बच्न सकिन्छ दमको ब्यथाबाट
Dec 2nd 7:54 AM
सबै प्रकारका कोरोना भेरियन्ट मार्ने ‘एन्टिबडी’ पत्ता लगाएको चिनियाँ वैज्ञानिकको दाबी
Dec 1st 8:36 AM
नेपालमा अनुमानित एचआईभी संक्रमितको संख्या ३० हजार, उपचारमा जम्मा २० हजार मात्र
Nov 30th 7:29 AM
शिविर कुरेर बस्छन् मोतीबिन्दुका बिरामी
Nov 29th 8:00 AM
छैटौं एपी क्याट समिट इन्डोनेशियाको जाकर्तामा हुने
Nov 28th 8:19 AM
सबै नागरिकका लागि पर्याप्त खोप छ : स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा